लज्जा शरणम् ! | चितवन पोष्ट
लज्जा शरणम् !
नारायणी नदीकिनारमा रहेको फोहोर
पछिल्लो समय भरतपुर महानगरले स्मार्ट सिटी बनाउने रटान लगाइरहेका बेला नारायणी नदीकिनारमा थुप्रिएको फोहोरले भने गिज्याइरहेको अनुभूति गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवन, भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति, चितवनको संयुक्त आयोजनामा एक साताअघिमात्रै सम्पन्न चितवन महोत्सवस्थलको फोहोर नउठ्दा यतिखेर लाजसमेत लज्जित भएको छ । नारायणी नदी दिनप्रतिदिन फोहोर र प्रदूषित हुँदै जाँदा युवाहरुको समूह वे ग्रुपले सरसफाइ अभियान गर्दै आएको छ । सरसफाइ अभियानमा महानगरका जनप्रतिनिधिसमेतको पनि सहभागिता रहँदै आएको छ । तर, अहिले फोहोर कसले सफाइ गर्ने भन्ने विषयमा महानगर पन्छिएको देखिएको छ । महोत्सव आयोजनाका सहआयोजक संस्था महानगरले फोहोर उठाउने जिम्मा उद्योग वाणिज्य संघकै हो भनेर टार्न मिल्दैन । चितवनमा खुला सार्वजनिक स्थल नहुँदा महानगरवासी फुर्सदको समयमा नदीकिनारमा जम्मा हुने गर्छन् । केही साना व्यवसायीले आयआर्जन गरेर जीविका चलाएका छन् । महोत्सव सकिनासाथ सरसफाइमा ध्यान नदिँदा नारायणी नदीकिनार कुरुप बनेको छ । जसले वातावरणीय सौन्दर्यमात्र बिगारेको छैन, नदीसमेत प्रदूषित बनेको छ । नदीकिनार डम्पिङ साइटजस्तै देखिनु महानगरकै लागि विडम्बनाको कुरा हो ।
नारायणी नदीकिनार पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास भइरहेको छ । सरसफाइ र व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने यो स्थल अनुपम वातावरणीय सौन्दर्यको पर्याय बन्न सक्छ । तर, यस्ता किसिमका हेलचेक्र्याइँले आयोजक सरसफाइमा गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । सहरबजार र नदीकिनारको फोहोरले हाम्रै सभ्यतामाथि पटाक्षेप गर्छ । भरतपुर महानगरले नमुना सहर बनाउने उद्घोष गरिरहँदा फोहोर उठाउने जिम्मा हाम्रो होइन भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । फोहोर उठाउने जिम्मा कसले लिएको हो ? उसलाई दबाब दिएर कारबाही गर्नुपर्छ । उसो त सार्वजनिकस्थलको फोहोर सरसफाइ गर्ने अभियान गर्दै आएको वे ग्रुपले महोत्सव अवधिभर महोत्सवमा सरसफाइसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम नगरेको होइन । पुस २५ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्म भएको महोत्सवमा जथाभावी फोहोर गर्दिनँ भनेर १२ हजार जनाले हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । महोत्सवमा सरसफाइका लागि वे ग्रुपले ५४ जना सरसफाइ अभियन्ता निःशुल्करुपमा खटाएको थियो । प्रत्येक स्टललाई एउटा डस्टविन वितरण गरिए पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेन । महोत्सवमा स्टल राखेका होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले नदीमै भाँडा माझेर प्रदूषण बढाउने काम गरे ।
नदीखोला सफाइ राख्न महानगरका सबै नागरिकको उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ । फोहोर पोको पारेर नदीमा फ्याँक्ने, कपडा धुने, नाला नै नदीमा मिसाउने, गाडी धुनेजस्ता गतिविधिले नदी प्रदूषण बढाउँछ । यस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्दै सबैको साझा प्रयासबाटमात्रै नारायणी नदीको पानी कञ्चन हुनसक्छ । नदी फोहोर गर्नु सार्वजनिक अपराध हो भन्ने बुझाइ नहुँदासम्म यस्ता किसिमका लापरबाही बढेर जानेछन् । नाफामुखी गतिविधिका लागि महोत्सव गर्ने तर महोत्सव सकिएपछि फोहोर असरल्ल छोड्ने प्रवृत्ति आफैँमा गलत हो । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनले महानगरको मुख ताक्ने र महानगरले उवासंघको जिम्मेवारी हो भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । महोत्सवस्थललाई पहिलेभन्दा सफा, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने काममा दुवै संस्थाले उत्तिकै भूमिका निभाउनुपर्छ । सहरबजार र नदीखोलामा फोहोरमैलाको दुर्गन्धले गिज्याउँदै गर्दा स्मार्ट सिटीको सपना कसरी पूरा होला ? नदी अवलोकन गर्ने जो कसैले पनि नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जिम्मेवार पक्षले इमान्दारिताका साथ फोहोर उठाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । महानगरवासीको स्वास्थ्य र सभ्यतासँग जोडिएको फोहोर व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक देखिएको छ ।